Chiffon lehibe Mill
Ity chipper hazo ity dia milina manokana amin'ny famokarana sombin-tsolika lehibe ho an'ny famokarana arina vita amin'ny marbecue na sombin-javatra ampiasaina ho toy ny mampihena fitaovana mandritra ny famokarana ferro alloy. Hisolo ny coke amin'ny dingana izany ny sôkôlà. Ny haben'ny sôkôla dia azo ahitsiana amin'ny halavany 50-150 mm. Ny fanitsiana dia atao amin'ny alàlan'ny fanalavirana hampidinana na midina.
Ny zavamaniry dia napetaka amin'ny flange vy 12 m mba hanamora ny fitaterana. Ny zavamaniry dia afaka ihany koa ny latabatra fihinana ho an'ny famahanana stock tokana ampiasaina. koa misaraka amin'i Long Jon dia amboarina ho an'ny ozinina.